Umaki: i-google analytics | Martech Zone
Umaki: i-google analytics
I-VideoAsk: Yakha Amafaneli Evidiyo Abandakanyayo, Asebenzisanayo, Omuntu Siqu, Asynchronous
NgoMsombuluko, Ephreli 18, 2022 NgoMsombuluko, Ephreli 18, 2022 Douglas Karr
Ngesonto eledlule bengigcwalisa inhlolovo yabagqugquzeli bomkhiqizo engangicabanga ukuthi ufanele ukukhangiswa futhi inhlolovo eyayiceliwe yenziwa ngevidiyo. Bekuheha kakhulu… Ngakwesokunxele kwesikrini sami, ngibuzwe imibuzo omele inkampani… ngakwesokudla, ngichofoze futhi ngaphendula ngempendulo yami. Izimpendulo zami zazinesikhathi futhi ngaba nekhono lokuphinda ngirekhode izimpendulo uma ngingakhululekile ngazo
Sebenzisa i-jQuery ukuze ulalele futhi udlule ukulandelela umcimbi we-Google Analytics nganoma yikuphi ukuchofoza
NgoLwesithathu, ngoMashi 9, 2022 NgoLwesithathu, ngoMashi 9, 2022 Douglas Karr
Kuyangimangaza ukuthi ukuhlanganiswa okwengeziwe namasistimu akufaki ngokuzenzakalelayo Ukulandelela Umcimbi we-Google Analytics kuzinkundla zabo. Isikhathi sami esiningi ngisebenza kumasayithi amaklayenti ngithuthukisa ukulandelela kwezehlakalo ukuze kunikeze iklayenti ulwazi eliludingayo mayelana nokuthi iziphi ukuziphatha kwabasebenzisi ezisebenzayo noma ezingasebenzi kusayithi. Muva nje, ngibhale ngendlela yokulandelela ukuchofoza kwe-mailto, ukuchofoza kwe-tel, kanye nokuthunyelwa kwefomu le-Elementor. Ngizoqhubeka ukwabelana ngezixazululo
NgoLwesithathu, Februwari 23, 2022 NgoLwesithathu, Februwari 23, 2022 Douglas Karr
Senza amaphrojekthi ambalwa wokuthutha kanye nokuqaliswa kwabahlinzeki besevisi ye-imeyili kumakhasimende ethu. Nakuba kungavamile ukucaciswa ezitatimendeni zomsebenzi, iqhinga elilodwa esihlala silisebenzisa elokuqinisekisa ukuthi noma yikuphi ukuxhumana nge-imeyili kumakwa ngokuzenzakalelayo namapharamitha e-UTM ukuze izinkampani zibone umthelela wokumaketha nge-imeyili nokuxhumana kuthrafikhi yazo yonke yesayithi. Kuyimininingwane ebalulekile evamise ukunganakwa… kodwa akufanele neze. Yini izi
Landela ngomkhondo ukuchofozwa kwe-Mailto Emicimbini Yezibalo Ze-Google Usebenzisa Isiphathi Somaka se-Google
NgoLwesine, Januwari 27, 2022 NgoLwesihlanu, January 28, 2022 Douglas Karr
Njengoba sisebenza namakhasimende ekubikeni, kuyisidingo ukuthi siwakhele i-akhawunti yomphathi womaka we-Google. I-Google Tag Manager ayiyona nje inkundla yokulayisha zonke izikripthi zewebhusayithi yakho, futhi iyithuluzi eliqinile lokwenza ngendlela oyifisayo lapho futhi nini ufisa ukuqalisa izenzo ngaphakathi kwesayithi lakho usebenzisa noma yimiphi imibhalo oyifakile. Ukunikeza i-imeyili egadiwe ngaphandle kusayithi lakho kuyindlela enhle yokwenza kube lula kuyo
NgoLwesithathu, Januwari 26, 2022 NgoLwesine, Januwari 27, 2022 Douglas Karr
Njengoba sisebenza namakhasimende ekubikeni, kuyisidingo ukuthi siwakhele i-akhawunti yomphathi womaka we-Google. I-Google Tag Manager ayiyona nje inkundla yokulayisha zonke izikripthi zewebhusayithi yakho, futhi iyithuluzi eliqinile lokwenza ngendlela oyifisayo lapho futhi nini ufisa ukuqalisa izenzo ngaphakathi kwesayithi lakho usebenzisa noma yimiphi imibhalo oyifakile. Kujwayelekile ukuthi ngaphezu kwesigamu sabo bonke abavakashi besayithi lakho bafika kusayithi lakho nge-